နေ၀င်ချိန် Sunset ကို လှမ်းတက်လို့ ကြည့်ကြမယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နေ၀င်ချိန် Sunset ကို လှမ်းတက်လို့ ကြည့်ကြမယ်…
နေ၀င်ချိန် Sunset ကို လှမ်းတက်လို့ ကြည့်ကြမယ်…
Posted by Ma Ei on Jan 23, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 23 comments
နေ၀င်ချိန် နှစ်ခါဆုံရတဲ့ ညနေခင်း
နေ၀င်ချိန်လေးတွေရဲ့ လှပတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ အတူ ခဏလေးသာကြည့်ခွင့်ရတဲ့ နေမင်းကြီး ကို နှစ်သက်စွာ ငေးကြည့် နေတတ်ကြသူတွေထဲမှာ ကျမလဲ တစ်ယောက်ပါဝင်သူပါ…နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ခရီးသွားစဉ် ရောက်ရှိရာ အရပ်ဒေသ တွေမှာလည်း နေ၀င်ချိန်အလှကို အချိန်ရရင်ရသလို ခံစားမိတတ်ပါတယ်… ရွှေဝါရောင်၊ ပုဇွန်ဆီရောင်၊အနီရောင်ကနေ နီညိုလို့ မှောင်ရီသမ်းလာသည်အထိ အရောင်မျိုးစုံ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ သွားတာတွေကို ဘ၀တစ်ခုလို ခံစားမိပါတယ်…
ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ ဘ၀လေးတွေ ကြာရှည်ချင်မိခဲ့တာပါ…
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကြည့်မ၀လွန်းလို့ အနောက်ဖက်ကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ နေမင်းကြီးနောက် ခဏလောက်လိုက်ကြည့်ချင်မိပါတယ်…ခဏလောက်များပြန်ထွက်လာပါလားလို့လဲ တောင်းဆိုမိပြန်ပါသေးတယ်…
အဲ့ဒီလို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ရရှိခဲ့တဲ့ ညနေခင်းလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်…
နေ၀င်ချိန်မှာ ၀င်သွားတဲ့ နေမင်းကြီးနောက် လိုက်ကြည့်လို့ ခဏပြန်ထွက်လာတဲ့ နေမင်းကြီးကို ထပ်ကြည့်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်… …
ဒီလိုဆိုမှတော့ ဒါထူးဆန်းပါ့မလားလို့ ပြောချင်လဲ ပြောပါတော့…
ဒီလပိုင်း ရုံးမှာ လက်ရှိနေရာကနေ အသစ်စလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကို ပြောင်းပြီးတာဝန်ယူရပါတယ်။ နေပြည်တော် Station ကို Air Charter နဲ့ တစ်ရက်ခရီး အလုပ်ကိစ္စ သွားခဲ့ရတဲ့17/12/12 နေ့ညနေခင်းလေးမှာ နေ၀င်ချိန်ကို နှစ်ခါကြည့်ခွင့် ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော် လေဆိပ်ကမြင်ရတဲ့ ညနေ နေ၀င်ချိန်လေးက လှပလွန်းလှတယ်…လေယာဉ်ပြေးလမ်းကအတက်မှာ နေလုံးကြီး တစ်လုံး၊တစ်ခြမ်းကနေ ပျောက်သွားသည်ထိ ငေးကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်…လေယာဉ်ပျံတက်လာပြီး မကြာခင်မှာဘဲ အလင်းရောင်လင်းလက်လာလို့ ညာဖက်ကိုကြည့် လိုက်မိတဲ့အခါမှာ နေမင်းကြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရတာဖြစ်
၀င်ပြီးသားနေ ပြန်ထွက်ချိန် ညနေခင်း
နေ၀င်ချိန်မှာ နေမင်းကြီးပြန်ထွက်လာတာကို ထပ်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တာမို့ အတိတ်ကောင်းလို့ မှတ်ယူမျှဝေချင်မိပါတယ်….
ရွာသူရွာသားများ ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ အချိန်များကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းဖြင့်…
မွအိ။ မတွေ့တာ ကြာပါပကော။
ပွဲနေ့က ပုံတွေမှာတော့ လှလို့။
နေ၀င်ချိန်မှာ နေမင်းကြီးပြန်ထွက်လာတာကို တွေ့သူ မွအိ ကံကောင်းပါစေဗျာ။
ငယ်တုန်းကတော့ နေဝင်ချိန်ကို ပုစွန်ဆီရောင်တောက်တောက်လို့ တင်စားတဲ့ အခါတိုင်း ပုစွန်ထုတ်ကြီး အမြဲစားချင်ခဲ့တယ်။
ခု ပြန်ကြည့်မိ ပြန်ခံစားမိတော့ အဲဒီ တစ်ရောင်ထဲမဟုတ်ပဲ ပြောပြလို့မရတဲ့ အရောင်စပ်လေးတွေပါတွေ့ရတတ်တယ်။
ဘာလို့တုန်းတော့မသိ နိုဝင်ဘာလတွေရဲ့ နေဝင်ချိန်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ :harr:
လှတယ်ပြောလို့ သဘောကျမိပါတယ်… :hee:
စက်တင်ဘာ Sunset က အလှဆုံးလို့ အဆိုရှိတယ်…
သေချာတာကတော့ နေ၀င်ချိန်တွေ လှတယ်ဆိုတာလေးပါနော်…
အန်တီမအိရေ လူလည်း လှသလို ဓာတ်ပုံလည်း လှပါတယ်။ နေ၀င်ချိန် နေမင်းကြီးက လွမ်းစရာပါပဲ။ ၂ခါပဲ ပြန်ထွက်ဦးတော့ သဘာဝအတိုင်း နေဆိုတာ ၀င်ရတာပါပဲလေ။ ဓာတ်ပုံထဲက ရတဲ့ သံဝေဂတရားတွေပါ။ ဘာပဲပြောပြော နေ၀င်ချိန် ၂ခါ ကြုံရတဲ့ အန်တီမအိ ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ရန်ကုန် ညနေနေ၀င်ချိန်ကို နေ့တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ နေနေရလို့ ညနေဆည်းဆာကို ငေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ် …
ဆည်းဆာကို ပင်လယ်ကနေကြည့်ရတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ …
26-28/12/12. မှာ ငွေဆောင်ကမ်းခြေရဲ့
နေလုံး အကြီးကြီးမြင်ရလို့ အကြိုက်ဆုံးပါနော်…
နေက နေ၀င်လိုက် နေလုံးကြီးပျောက်သွားလိုက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရှိနေတယ်။
လူကတော့ တသက်မှာ တစ်ကြိမ် နေ၀င်သလို ပျောက်သွားရင် ……..။ ဤဘ၀ ဤမျှသာပေါ့။
ဘ၀ ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့
ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပိုင်ဆိုင်လိုကြမှာပါ…
ပုံတွေအရမ်းလှတယ်နော် မအိ ညနေခင်းအလှကို သဘာဝအတိုင်းခံစားရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတာပဲ … ဒါပေမဲ့ မအိ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းသာသလိုခံစားရတယ်။
၀င်ပြီးသား နေလုံးကြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ အလင်းက ပိုစူးရှနေသလိုဘဲ…
အလုပ်နေရာသစ်မှာ အစစ အရာရာ ပိုမိုကောင်းမွန်အစဉ်ပြေပါစေလို့နော်….
နေရာ မတူတော့ပေမယ့် အမြဲတမ်း ညီမလေးတွေပါ…
ဟိုးရက်တွေက အရမ်းလုပ်များနေ ရှင်းနေရလို့ ရွာထဲမရောက်တာရယ်..
ခုတော့ နဲနဲ အသက်ရှူချောင်သွားလို့ မအားတဲ့ ကြားက
ရွာကို အပြေးအလွှားလာခဲ့တာ..ရွာမှာ ဆုံကြမယ်လေ…
မအိရေ..ကျနော်ကတော့ နေ၀င်နေထွက်တွေကို သဘာဝရဲ့
သန်းခေါင်ထက်ညဉ့် မနက်ပါဘူးကွာလို့ ပြောကြသလို..
လောကကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် မနက်ကြရင် နေထွက်လာမှာပါ …
အလင်းရောင်တွေပျောက်ပြီး ကုန်လောက်ပြီထင်လို့ အိမ်ပြန်မယ်လုပ်မှ
ရောင်စဉ်တွေဖြာထွက်တာ မကြာ ခဏကြုံတတ်ပါ၏။
မြန်မာ့အလင်း ထဲ ပါလာနေအုန်းမယ်နော
မမ(လားရှိုး) က လက်သွက်ပါဘိနဲ့ 
သေလျှင်ပိန် …ဟီးဟီး ကပေ့ လိုကဗျာစပ်ကြည့်တာ
မောင်ပေ က ကဗျာမစပ်ရဘဲနဲ့
ဒီနေ၀င်ချိန်ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်မိတော့ နေ၀င်ချိန်ရှုခင်းကို ပုဂံမှာသွားကြည့်ချင်လာပြီ…
ပုဂံ ရဲ့နေ၀င်ဆည်းဆာကလည်း အရမ်းကိုလှပပါတယ်…
Tin Tin says: …
Comment အတွက် ကျေးဇူးနော်…ငွေဆောင်ကမ်းခြေ ဆည်းဆာလေး ထပ်တင်ပါဦးမယ်…
အမအိရဲ့ နေ၀င်ချိန်လေးကြည့်လိုက်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ…
နေပြည်တော် လေဆိပ်ကမြင်ရတဲ့ ညနေ နေ၀င်ချိန်လေးက
လှပလွန်းလှတယ်…လေယာဉ်ပြေးလမ်းကအတက်မှာ နေလုံးကြီး တစ်လုံး၊တစ်ခြမ်းကနေ ပျောက်သွားသည်ထိ ငေးကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်…
လေယာဉ်ပျံတက်လာပြီး မကြာခင်မှာဘဲ အလင်းရောင်လင်းလက်လာလို့
ညာဖက်ကိုကြည့် လိုက်မိတဲ့အခါမှာ နေမင်းကြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်…
လေယာဉ်ကပျံတက်လာတာမို့ အမြင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်နေမင်းကြီးကို ပြန်မြင်ရတာပါ…